Vaovao - Tonga tao amin'ny Weyer Electric ny mpitarika ny tanànan'i Hangtou mba hanao fizahana fiarovana mialoha ny Fetiben'ny Lohataona
Tonga tao amin'ny Weyer Electric ny mpitarika ny tanànan'i Hangtou mba hanao fanaraha-maso ny fiarovana alohan'ny Fetin'ny Lohataona
Tamin'ny fetin'ny Lohataona, mba hahazoana antoka fa hanana fialan-tsasatra milamina sy am-pilaminana ny orinasa rehetra ao an-tanàna, dia tonga tao amin'ny Shanghai Weyer Electric Co. Ltd. hanao fanaraha-maso ny fiarovana mialoha ny fialantsasatra.
Chen Bing, tale jeneralin'ny Shanghai Weyer Electric Co., Ltd., no niaraka tamin'ny fandraisana mba hanaovana fizahana.
Ny ekipa mpanara-maso dia nijery ny famokarana sy ny fiarovana ny afo amin'ny atrikasa sns, ary nanao fanaraha-maso amin'ny antsipiriany momba ny fivoahana amin'ny fiarovana, ny fantsom-panafody, ny toerana famonoana afo, ny jiro vonjy maika, sns. fikojakojana ny toe-java-misy fikojakojana sy ny fikarakarana ny adidin'ny mpiasa.
Nasongadin'ny sekretera Yan fa ny famokarana fiarovana dia manan-danja kokoa noho ny Mount Tai, ary ny orinasa dia tokony hanatsara ny fahatsapany andraikitra sy maika, ary handray fepetra mahomby hitazomana tsara ny lalan'ny famokarana fiarovana, hahazoana antoka fa ho vita ity taona ity ary amin'ny taona ho avy ho fanombohana tsara.
Nomarihin'ny lefitra lefitra Zhou Bin: Voalohany, ny orinasa dia tokony hampihatra ny andraikitra lehibe amin'ny famokarana fiarovana; faharoa, izy ireo dia tsy maintsy manome lanja lehibe ny asa fiarovana, ary mandamina sy manaparitaka ny asa fiarovana amin'ny asa hafa; fahatelo, ampiharo amin'ny fomba hentitra ny "andraikitra iray sy andraikitra roa". Ny asa fiarovana dia mihombo isan-karazany, ka ny andraikitra dia mety hahatratra ny olona nefa tsy hamela làlana maty; ny fahefatra dia ny fanamafisana ny fanabeazana momba ny fiarovana ireo mpiasa am-perinasa mandritra ny festival mba hiantohana fa tsy hitranga ny karazana lozam-pifamoivoizana.
Ny tale jeneralin'ny orinasa, Andriamatoa Chen Bing, dia nilaza ihany koa fa amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia nanao fanaraha-maso fiarovana feno, ary ny asa fiarovana dia nampiharina araka ny fepetra takian'ny tanàna amin'ny departemanta.